बर्खा सुरु- कर्णाली नदीको कटानले तटीय क्षेत्रमा त्रास – Nepal Japan
बर्खा सुरु- कर्णाली नदीको कटानले तटीय क्षेत्रमा त्रास
तटबन्ध निर्माणका नाममा भइरहेको ढुङ्गा उत्खननले नदी कटान तीव्र पार्दा झन जोखिम
नेपाल जापान २७ जेष्ठ १३:२२
कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा कर्णाली नदीले बर्सेनि सयौँ बिघा जमीन कटान गर्दछ । बर्खा लाग्न शुरु भएपछि यहाँका नागरिकलाई हरेक वर्ष नदी कटान तथा डुबानको त्रासले सताउँछ ।
कर्णाली नदीको कटानले टीकापुर–७ स्थित सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनक्षेत्रमा २० बिघा जमीन कटान गरेको छ । नदीले बर्सेनि सामुदायिक वनको जमीन कटान गर्दै आएको छ । नदी कटान नियन्त्रणका लागि वनको उत्तरपूर्वी भागमा तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ । तटबन्ध निर्माण भइरहेकै क्षेत्रमा नदीले कटान तीव्र पारेको छ । “सामुदायिक वनको २० बिघा बढी जमीन कटान भइसकेको छ । यतिखेर नदीले कटान झन तीव्र पारेको छ”, वन समितिका अध्यक्ष धनसिंह साउदले भन्नुभयो, “जङ्गल तहसनहस भइसकेको छ । कर्णाली नदीमा तटबन्ध शुरु भएको छ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म सकिएको छैन । यसले झन कटान बढेको छ ।”
उहाँले तटबन्ध निर्माणका नाममा भइरहेको ढुङ्गा उत्खननले नदी कटान तीव्र पार्दा झन जोखिम बढेको आरोप लगाउनुभयो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा तटबन्ध कार्यको ठेक्का सिद्धि साइ कन्स्ट्रसनले लिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला वन क्षेत्रमात्र नभई नगरपालिकाको दौलतपुर, श्रीलङ्का, धनसिंहपुर क्षेत्र, सत्ती पुलसमेत जोखिममा रहेको बताउनुहुन्छ । “श्रीलङ्का बस्ती बर्सेनि दर्जनौँ विघा कटान हुँदै आएको छ । यस वर्ष त अझ हिउँदमा पनि कटान भएको छ । त्यहाँ नदीमा पानीको बहाव घट्दा बढी कटान भएको छ”, वडाध्यक्ष ठकुल्ला भन्नुहुन्छ, “यस वर्ष बर्दियातर्फ तटबन्धको काम शुरु भएको थियो । बर्खा लागेपछि त्यो काम पनि शुरु हुन सकेको छैन । यस वर्ष बर्सातमा थप जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।”
सात वर्षअघि कैलाली र बर्दिया जोड्न कर्णाली नदीमा निर्माण भएको सत्ती पुलसमेत नदी कटानका कारण जोखिममा छ । पुलको बर्दियातर्फ कटान तीव्र भएपछि पुल जोखिममा परेको हो । “बर्दियातर्फ कटान हुँदा छेउमा प्वाल परेको पुल बर्सेनि मर्मत गरेर टालटुल मात्र पारिएको छ । यो पुल भत्केमा बर्दिया र कैलालीको सम्पर्क टुट्ने अवस्था आउनेछ”, स्थानीयवासी शेरबहादुर साउदले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष बर्खामा यहाँका नागरिकले नदी बस्तीमा पस्नबाट जोगाउन जैविक तटबन्ध गर्ने गरेका छन् । यसरी त्रासमा कति दिन यहाँ बस्न सकिएला रु”
२. जापान बनाउँदैछ वास्तविक मानव जस्तै देखिने रोबोट
३. अरुणोदय माविका संस्थापक शारदाविक्रम वस्न्यातलाई सम्मान